Soomaaliya oo codsatay in DF lagu soo wareejiyo Burcad-badeed ku jira xabsiyada Kenya – Radio Daljir
Seteembar 3, 2013 3:09 b 0
Mombaza, September 3, 2013 – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo dhowaysay go?aan ay qaadatay Maxkamada sare ee magaalada Mombaza, kaas oo xukunka lagaga khafiifiyey in ku dhow 200 oo Soomaali ah oo ku xiran xabsiyada dalkaas.
Maxamed Cali Ameriko safiirka Soomaaliya ee dalka Kenaya ayaa sheegay in ay uga mahad-celinayaan maxkamada sare ee magaalada Mombaza, ?go?aanka ay ku qaadatay in ay ku yarayso xukunka dhalintaas Soomaalida oo haatan laga dhigay xukunkooda mid 5 sano oo xarig ah.
Safaarada Soomaalida ee Kenya ayaa guul ku tilmaantay go?aanka ay qaadatay maxkamada sare ee dalka Kenya, waxayna sheegtay in ay dadaal dheer u galeen sidii loo yarayn lahaa sanadaha badan ee xabsiga ah.
Docda kale safaarada Soomaalida ee dalka Kenya waxay ka codsatay dowladda dalkaas, in gebi ahaanba la soo wareejiyo dhalinyarada Soomaalida ee ku eedeysan falalka Burcad-badeednimo, kuwaas oo ku jira xabsiyada magaalada xeebta ah ee Mombaza.
200 ee dhalinyarada soomaalida ah ayaa ku jiray xabsiyada Kenya Afartii sano ee la soo dhaafay, waxay horey u heleen xukun min 20 sano ah, balse haatan waxaa laga dhigay xariggoda min 5 sano, iyadoo si weyn loo khafiifiyey xukunkaas.